Waa maxay xaalada falcelinta ee Ba(NO3)2 (barium nitrate) oo la falgala K2SO4 (potassium sulfate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa KNO3 (potassium nitrate) iyo BaSO4 (barium sulfate)?
Dhacdada ka dib Ba (NO3)2 (barium nitrate) waxay la falgashaa K2SO4 (potassium sulfate)
SO3 + K2SO4 → K2S2O7
sulfate potassium Dibloomaasiyam ayaa baabi’isa; Milixda cusbada dipotium-ka loo yaqaan 'disulfuric acid'
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta SO3 + K2SO4 → K2S2O7
Waa maxay xaalada falcelinta ee SO3 () ay kaga falceliso K2SO4 (potassium sulfate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa K2S2O7 (Dipotassium disulfate; Disulfuric acid dipotassium cusbo)?
Dhacdada ka dib SO3 () waxay la falgashaa K2SO4 (potassium sulfate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga K2S2O7 (Dipotium disulfate; Disulfuric acid dipotium salt), oo u muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada SO3 + K2SO4 → K2S2O7
Su'aalaha la xiriira badeecada K2S2O7 (Dipotassium disulfate; Disulfuric acid dipotassium cusbo)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee K2S2O7 (potassium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2S2O7 (Dipotassium disulfate; Disulfuric acid dipotassium cusbo) badeecad ahaan?
H2SO4 + K2SO4 → 2KHSO4
acid sulfuric sulfate potassium
( đậm đặc ) (riyo)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta H2SO4 + K2SO4 → 2KHSO4
What is reaction condition of H2SO4 (sulfuric acid) reacts with K2SO4 (potassium sulfate) ?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa KHSO4 ()?
Phenomenon after H2SO4 (sulfuric acid) reacts with K2SO4 (potassium sulfate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga KHSO4, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada H2SO4 + K2SO4 → 2KHSO4
What are the chemical and physical characteristic of KHSO4 (potassium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh KHSO4 () badeecad ahaan?
K2SO4 + Hoose2O6 → BASO4 + K2S2O6
sulfate potassium Barium dithionate; Milixda barium Dithionic acid barium sulfate Dithionate-ka macdanta ah; Milix diitibiyatiyam diitioniksaydh ah
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta K2SO4 + Hoose2O6 → BaSO4 + K2S2O6
Waa maxay xaaladda falcelinta ee K2SO4 (potassium sulfate) oo la falgala BaS2O6 (Barium dithionate; Dithionic acid barium salt)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa BaSO4 (barium sulfate) iyo K2S2O6 (Potassium dithionate; Dithionic acid dipotassium salt)?
Dhacdada K2SO4 ka dib (potassium sulfate) waxay la falgashaa BaS2O6 (Barium dithionate; Dithionic acid barium salt)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga K2S2O6 (Potassium dithionate; Dithionic acid dipotassium salt), oo ka muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda BaS2O6 (Barium dithionate; Dithionic acid barium salt), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada K2SO4 + Hoose2O6 → BaSO4 + K2S2O6
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta BaS2O6 (Barium dithionate; Dithionic acid barium salt)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee BaS2O6 (Barium dithionate; Dithionic acid barium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaS2O6 (Barium dithionate; Dithionic acid barium salt) ka falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee BaSO4 (Barium dithionate; Dithionic acid barium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaSO4 (barium sulfate) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta K2S2O6 (Potassium dithionate; Dithionic acid dipotassium salt)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee K2S2O6 (Barium dithionate; Dithionic acid barium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh K2S2O6 (Potassium dithionate; Dithionic acid dipotassium cusbo) badeecad ahaan?
2CH3COOH + K2SO4 → H2SO4 + 2CH3KOOBAN
etanoic acid sulfate potassium acid sulfuric Botaasiyam acetate; Kalkaalisada aashitada; Cusbada lagu durayo; Cusbada Aashitada acid cusbada
(lng) (digo yara) (digo yara) (digo yara)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2CH3COOH + K2SO4 → H2SO4 + 2CH3KOOBAN
Waa maxay xaaladda falcelinta ee CH3COOH (ethanoic acid) ay kaga falceliso K2SO4 (potassium sulfate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2SO4 (sulfuric acid) iyo CH3COOK (Potassium acetate; Acetic acid potassium, salt Diuretic; Acetic acid potassium salt)?
Dhacdada ka dib CH3COOH (ethanoic acid) waxay la falgashaa K2SO4 (potassium sulfate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2CH3COOH + K2SO4 → H2SO4 + 2CH3KOOBAN
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2SO4 (potassium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2SO4 (sulfuric acid) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOK (potassium sulfate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOK (Potassium acetate; Acetic acid potassium, salt Diuretic; Acetic acid potassium salt)